"I eqolo futhi imoto uneconomical kakhulu emhlabeni" - lokhu libhekene "Rolls Royce" kuwo wonke umlando. Kungani-ke, kuba into isifiso for lenqwaba abantu abavela emazweni ehlukene?
Ukuvela of the "-Rolls-Royce"
Okokuqala, isizathu - engakaze ibonwe izinga okusezingeni yokuhlangana imoto, lapho zonke izindlela futhi Amayunithi abelethwe ngesandla, ngokucophelela futhi kancane, ngokuhlolwa okuphindaphindiwe, kanye intuthuko okwalandela. Ngamunye 'Rolls-Royce "- kuba okukhethekile, izimpawu ezisobala seriality, Standardization, futhi ikakhulukazi inhlangano elihambayo. Ngakho-ke, le mishini yayithatha itholakala isamba ukuthi aseqeli amakhophi ayinkulungwane ngonyaka. Sebenza akunakwenzeka ukuzwa motor, kanye kuphela umsindo emotweni - ukuthi kuboniswe ngophawu amawashi umthengi ohlezi izihlalo elithambile, zalungisa benezinhloso okuqotho, ubhala isheke.
Umlando "-Rolls-Royce" zaqala ngo-1904 lapho yokudlela ehhotela "Midland" Manchester wahlangana usomabhizinisi Frederick uHenry Royce nesiNgisi Aristocrat Charlz Styuart Rolls, umlandeli omkhulu motor yamahhashi. Ngaleso sikhathi, le ndoda kwakudingeka ishayelwa phezu Decauville ukukhiqizwa isiFulentshi, njengoba kwenziwa e-UK izimoto yabo yayingaxhomekile. Lokho isizathu Rolls Royce futhi bahlele ukukhiqizwa yabo. Frederick Royce esephuze abanye nakho ekudaleni chassis yezimoto kanye yangaphakathi omlilo izinjini, futhi uCharles Rolls waba nethuba ukusekela project omusha wezimali. Yavela kanjalo-ke edume-Rolls-Royce.
Amanani inqubomgomo, inkampani "Rolls Royce" awuzange, izimoto kusukela ekuqaleni ziye igxile umthengi yabo ekhethekile uzimisele ukukhokhela wedwa. Le phrojekthi yokuqala enkulu inkampani uMoya Silver (ukuhumusha - "Ghost Isiliva"). Imoto laqanjwa kanjalo ngenxa ngombala isiliva, kanye nesigaxa operation ngokulambisa ezwakalayo yenjini, efana umnyenyezo. Ghost Isiliva wathola injini entsha 7 amalitha, eziyisithupha isilinda, ecindezelwa Lubrication we crankshaft. Chassis imoto kwaba, efana injini, igxile umuzwa wenduduzo ngaphakathi emotweni. Bobabili ayenendawo ukumiswa ende lulwimi iziphethu, okunikeza ride bushelelezi. Imoto athuthukile okusezingeni eliphezulu, ngokuvumelana imibono isikhathi, nesivinini komgwaqo-eliyifa. Modern ukuqhubeka Isiliva Ghost kuyinto Rolls Royce Wraith, ogama ukucaciswa okuningana zihluke esasisandulele, nakuba abaningi izinzuzo onobuhle owedlule wasinda.
"-Rolls-Royce" kanye kweMpi Yezwe Yokuqala
Ukuze silondoloze idumela lalo njengoba imoto uyakufanelekela futhi enokwethenjelwa, Ghost Isiliva wadabula ezimbili run multi-day, omunye cishe ngejubane elingamakhilomitha angu-2,000, kwesibili - 15 000. Zombili imoto ukuhlolwa ngasinda ngodumo. Imoto kwasheshe super ethandwa. On the Ghost Isiliva ngisho ngaphawula izikhulu zempi of Great Britain, futhi umphumela waba ukuthi ngesisekelo chassis "kaMoya Isiliva" Continental zavezwa izimoto armored iBrithani amabutho ahlomile phezu izimpi Yokuqala Umhlaba. I nobuqhawe umnikelo Isiliva Ghost e-UK ekuqhutshweni bokulwa okukhulunywa ngakolunye uhlangothi Atlantic, e-United States. NePentagon usehalalisele ukuphathwa inkampani, "-Rolls-Royce", futhi isicebi Nelson Rockefeller wathenga ukusetshenziswa siqu Ghost Silver.
isibonakaliso inkampani "Rolls Royce" yasungulwa eminyakeni embalwa kamuva - uMoya Ecstasy (kuhunyushwa - "umoya injabulo"), okuyinto awuzange ushintshe kuze kube yilolu suku. Charlz Sayks, umpendi modernist, ekhuphuka nge sibalo yasekuqaleni yowesifazane saphezulu, sifisa phambili, ezikhipha izembatho, ukuncika emuva izikhali sengathi ukuba akhumule. Uma eqhathaniswa zonke izinhlobo amakati amnyama, ama-jaguar namaprotheni ukuthi kuhlobisa nezigqoko izimoto emhlabeni wonke, i-liwuphawu "uMoya injabulo" wabheka organic kakhulu futhi ihloniphekile futhi okubaluleke, sibalo mascot ukuhlangabezana isitayela eliphezulu imoto. I sibonelo wakhonza njengephayona isibonakaliso pin Eleanor Thornton, kusho uNobhala Mnumzane Dzhona Montegyu, umsunguli we Zonke England Club abashayeli nombhali ebhukwinitifundvo yokuqala imithetho ukushayela. U-Eleanor, ngeshwa, washona ngo-kweMpi Yezwe Yokuqala, lapho wahamba phezu umkhumbi ukuthi ahlasele ngwenya-German. Kodwa inkumbulo yakhe ukuthi bayophila "Flying Lady" phezu heatsink ngayinye "-Rolls-Royce".
Ngo-2003 e-International Motor Show Detroit wethulwa Phantom, pritsipialno new Umqondo imoto inkampani "Rolls Royce", ngaleso sikhathi kwase washintsha igama layo futhi yayibizwa ngokuthi Rolls-Royce Motor Cars Limited. "Phantom" BMW kwaba ifakwe volume motor 6.75 amalitha nge ilungiselelo V emise amasilinda nambili. Heavy-duty injini Kusolwa isimo olukhethekile imoto entsha, ibalwa i umthengi okukhethekile. Ngaphezu sokuphehla amandla, umshini Yayinesikhwanyana ngokuphelele izingxenye zokuqala "-Rolls-Royce". Ukuguqulwa-Rolls-Royce Phantom Coupe angabhekwa imoto enamandla kakhulu uhlelo yenkampani ize yavela Rolls Royce Wraith, isizukulwane esisha emotweni, kodwa kwaba ngemva kwesikhathi eside kakhulu.
2007 wabona ukukhululwa yochungechunge oluthile lwezinto ezenzeke 25 "Cute Mouse" qwa, ne statuette wendabuko "uMoya Ecstasy" ku kurediyetha, abenziwe yakuthatha. White "-Rolls-Royce" badedelwa njengoba iwuphawu behlonipha engu-100 kwasungulwa ukubukeka-Rolls-Royce imodeli Isiliva Ghost. YamaJubili Nhlangano "-Rolls-Royce" kusekhona eziningi, futhi ngamunye itawugujwa ngendlela ekhethekile.
Ngo-March 2013-Geneva Motor Show wethulwa Rolls Royce Wraith, imoto enamandla kakhulu emlandweni we brand odumile emhlabeni. Engine 620 amalitha. a. Lwenza umshini ukufinyelela imizuzwana 4.6 nje ijubane 100 km / h. Ijubane imoto kukhawulwe inani 250 km / h, kanti lo mkhawulo yokufakelwa kufinyelelwa ngenxa ukulungiswa we injector. Test sishayele Rolls Royce Wraith yabonisa abalulekile ezingaba okwengeziwe isivinini ukwanda. Nokho, akuwona wonke amakhasimende kudingeka ijubane 200 amakhilomitha ngehora. Ngokwesibonelo, amalungu omndeni British Royal ukujabulela imoto "-Rolls-Royce" e neminyaka engaba yikhulu edlule, kodwa engakaze ibonwe ukuze Queen of eNgilandi enganginayo begijima esendleleni eya Windsor Castle ne ijubane emotweni, "Formula 1". Mhlawumbe kuyindaba of ukunambitheka.
Umumo inkampani "Rolls Royce" kuhlanganisa: Phantom Swb, Phantom EWB, Phantom Drophead Coupe, Rolls Royce Ghost, Phantom Coupe, Rolls-Royce Ghost EWB, Rolls-Royce Vancouver, Rolls-Royce Isiliva Wraith.
Phakathi amamodeli samanje-Rolls-Royce Motor Cars Limited - nezinguquko eziningana okukhethekile. Lokhu, isibonelo, izimoto ezinamandla kakhulu futhi yempucuko Rolls Royce Wraith 2013, ngendlu ezimbili Coupe. wabuka Rapid, ekwazi ukumelana namandla omoya okusezingeni eliphezulu, futhi ngenxa yalokho, ijubane mayelana 250 km / h. Demand phakathi abalandeli ukushayela fast and ashukumisayo.
Kushintshwe Rolls Royce Wraith Vancouver, zenzelwe ukusetshenziswa ku Canada inkulu, has a simiso ngesivikelo esiphumelelayo ekuvimbeleni hypothermia. Kusukela ngo emakhazeni ikhiqizwa ngokuzenzakalela ngemuva zonke kudivayisi efudumele-umjovo.
Okwamanje, umholi ongenambangi phakathi izimoto, "-Rolls-Royce" iyona Rolls Royce Wraith, nomele super yesimanje brand edume. Yiqiniso, wonke amasiko kokudlule ebonwe ukuthuthukiswa imoto entsha, nakuba ngezinye izikhathi ukuhlanganisa amagugu wonke la mashumi eminyaka nge ipumelelo namuhla kungaba nzima. Ngubani, isibonelo, kungenzeka ucabanga ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili ungahleli ophahleni imoto manje besibhakabhaka esinezinkanyezi ezinkulungwane izinkanyezi ezincane nezinkulu? Kodwa ophahleni, "-Rolls-Royce Wright" lo mbono luyasetshenziswa nge gleam ngomqondo engokoqobo nengokomfanekiso. Abagibeli ukubukela ngobusuku obucwathile ka Nenkabazwe eningizimu ngokuvumelana esiqinile, umlaza ngamunye futhi Inkanyezi ngayinye ehlukile okuboniswa bokunemba.
Ukuguguleka wesibeletho: izimbangela, Yiqiniso kanye nokwelashwa isifo